သူ့ထမင်းထုပ်နဲ့သူလာတာပါနောင်တမရအောင် ဖတ်ကြည့်နော် – Shwe Yaung Media
2021 | 14/09/2021 | Knowledge | No Comments
သူ့ထမင်းထုပ်နဲ့သူလာတာပါကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်.အစကတော့သာမာန်ပါပဲ.နောက်တော့အိမ်ထောင်ကျတယ်စီးပွားရေးလေးအဆင်ပြေလာတယ်.မိဘတွေက၀န်ထမ်းဆိုတော့.ပင်စင်ယူတဲ့အခါနေစရာစားစရာမရှိတသက်လုံးက၀န်ထမ်းဘ၀မှာစိတ်ဖိစီးလာခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေနဲ့.ကျန်းမာရေးကချူချာ.အားလုံးထက်စာရင်.နည်းနည်းပါးပါးအဆင်လည်းပြေ.သားအိမ်ထက်စာရင်.သမီးအိမ္ကေနရတာ. ပိုအဆင်ပြေတယ်.ချွေးမနဲ့ကျ ငြူစူမစိုးလို့.သူမအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်.
သူမက. စီးပွားရေးက.ခုမှအဆင်ပြေစဆိုတော့.အဝေးကပဲထောက်ပံ့ချင်တယ်.အတူနေတဲ့သားသမီးက.ငရဲပိုကြီးတယ်. ပြောမှားဆိုမှား.ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လေ.ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်. ရပ်နိုင်လည်း.မိဘအရိပ်နေတုန်းကလို. သတိထားပေါ့အေ.အပြောမမှားစေနဲ့ပေါ့.လို့.ကျမကပြောလိုက်ပါတယ်
အသက်ကြီးလာတော့.စကားများလာတာရှိတာပေါ့လေ.ကျန်းမာရေးကမကောင်းတော့စိတ်တိုင်းကမကျ. လူကွီးဆျိုတော့လညျး..ဟိုလို.ဒီလို.ဇီဇာလေးတော့. ကြောင်တာပေါ့..သူမကဘာပြောလည်းဆိုတော့.သားသမီးဆယ်ယောက်ကို.မိဘ၂ပါးကကျွေးနိုင်တာ.သားသမီးလိုကျွေးရလို့ပါ
တလ.တလ. ဆေးဖိုးလည်း..၁၅သိန်း.ထက်မနည်းဘူး.ဆေးကလည်းဈေးကြီးချက်.ငွေနဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်.ပိုက်ဆံနှမြောလို့ပြောတာ. မဟုတ်ပါဘူး..တခြားမောင်ဆီမှာသွားနေရင်.က်မက.ပိုက်ဆံကုန်ပေမဲ့.အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့. တဲ့.ကုန်ကျစားရိတ်တွေအကုန်.က်မကေထာက္ပံ့မွာပါတဲ့
သမီးဖြစ်သူနဲ့မသေခင်. နွေးနွေးထွေးထွေး.နေချင်ရှာလို့နေမှာပါ. ညီမရယ်..ဆိုတော့.အမ.မသိဘူးနော်.တခါတခါရောဂါဖောက်ရင်.ကျမအလုပ်တွေ..အကုန်ဖျက်ပြစ်ရတာ.တအိမ္လုံး.ဆိုင်ထမင်းဟင်းပဲစားရတယ်.၀ဋျကွီးပါတယျအမရယျ.ဒီလိုနဲ့သူမအဖေဆုံးတယ်.အဖေ့စိတ်နဲ့.
အမေလုပ်သူလည်း.လပိုင်းပဲခြားတယ်. ဆုံးပါးသွားပါတယ်.သူမလည်း..မိဘဆိုတော့ငိုတာပေါ့လေရက်လည်ပြီးနောက်ပိုင်း..ကျမအမြင်..သူမက. ခါတိုင်းထက်.ပိုသွက်လက်ပေါ့ပါးနေပုံပါပဲ.အိမ်သန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်.ဘုရားပန်းတွေလဲ.
ဒီအရွယ်က.စီးပွားရှာရမဲ့အရွယ်လေ.ကျမမိဘတွေကြည့်ပလား.ပင်စင်လည်းယူရော. နေစရာမရှိ.ကျမအဲ့လိုဖြစ်မှာ.ကြောက်တယ်သိလား.ကိုယ့်တုန်းက..အေမြ မရခဲ့ဘူးလေ.ဒုက္ခတွေပဲရခဲ့လို့..ကိုယ့်သားသမီးကျ.အမွေပေးနိုင်အောင်.ကြိုးစားမယ်အမရေ
အဲ့လိုပြောပြီးမကြာပါဘူး.ကလေးကိုကျောင်းသွားကြိုတာ.ကားကို.ဒီဘက်မှာရပ်.သူ့ကလေးက.ကျောင်းပေါက်အထွက်.လမ်းကူးလာမှာစိုးရိမ်ပြီး.သားအဲ့ဖက်နေ.အမေလာခေါ်မယ်ဆိုပြီး..ရုတ်တစ်ရက်လမ်းဖြတ်အကူး.အရှိန်ပြင်းတဲ့. ကျောင်းသားဆိုင်ကယ်က.၀ငျတိုကျပွီး.ခြေသလုံး၃ပိုင်းကျိုးပြီး.အရိုးကနည်းနည်းကြေသွားတာ.စတီးရိုးထည့်လိုက်ရတယ်.အထဲမွာ.မူလီနဲ့စုပ်ပြီး.ပြန်ခွဲရတယ်.ဆိုလား.အိပ်ယာထဲလပေါင်းများစွာ.ဆေးရုံကဆင်းတော့ ..ဂျိုင်းထောက်ကကူရ.စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ကမပါ.
သူ့လုပ်ငန်း.သူကသွက်တော့ဦးစီး.ယောက်ျားနောက်လိုက်.ဆေးရုံတက်တဲ့ကာလမှာ. မိတ်ကပျက်.စီးပွားရေးက.ဇောက်ထိုးပြန်ကျလာတော့.သူမျှော်လင့်တာတွေနဲ့လွဲ.က်မကိုက.ကံဆိုးပါတယ်. အမရယ်..တဲ့
သူက..သူ့ထမင်းထုတ်နဲ့သူ.လာတာပါ.ညည်းဆီက. ဘာမွမယူပါဘူး..ဆိုတော့.’ဘယ္လိုအမ’.တဲ့.လူဆိုတာ.ကိုယ်ထမင်းထုတ်နဲ့ကိုယ်.လာတာပါ.ညီမေရ..အမြင်မှာတာ့…ညည်းကကျွေးထားရတယ်.. ဆိုပေမဲ့.သူ့ဆေးဖျိုး.သူ့ကံပါသလောက်.ညည်းတို့အဆင်ပြေခဲ့တာပဲလေ.သူ.ဒီအိမ်မှာနေတုန်းက.ညည်းပိုက်ဆံရှာရမခက်ဘူးသူ့ကုသိုလ်နဲ့သူ..သူ့ကုသိုလိကိုမှီပြီး..ညည်းအဆင်ပြေတာကို.စိတ်ကြီး၀င်တာကိုး..နှလုံးစက်ထည့်ဖို့.စားဖို့. ဆေးကုဖို့..ဆိုတာ.သူတို့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့. ဒါနကုသိုလ်ပါလာလို့.ညည်းအိမ်မှာနေသခိုက်.ညည်းကိုပါကျေးဇူးပြုသွားတာ.သူ့ဆန်သူစား..ကုန်တဲ့နေ့ပြန်တော့.ညည်း.ခုလက်ကြည့်ကျန်ခဲ့တာ
(၂၃)နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့ ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ…..။
ကိုယ်နဲ့တစ်ညစာပျော်ဖို့ခေါ်လာတဲ့ အပျော်မယ်လေးကို လမ်းဘေးကသူတောင်းစားကိုပေးပြီး ပျော်ခိုင်းလိုက်သောအခါ